रेल्वे लिकमै टाउको र खुट्टा काटिएको अवस्था दुई किशोरीको लास क्षतविक्षत !
परिचय पत्रअनुसार निभा पब्लिक कलेजको कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिइन् ।
२८ माघ, २०७५ || प्रकाशित ०८:१५:००
Photo Credit :Nepaldaily
वीरगन्ज, २८ माघ । रेल्वे लिकमा दुई किशोरीको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको छ ।
प्रदेश नं. २ को पर्सासँग सिमा जोडिएको भारतीय रक्सौल बजारको कंगना ढाला नजिकै दुई युवतीको शव फेला परेको हो । वीरगंजस्थित पब्लिक कलेजमा अध्ययन पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका २ भेडिहारीकी १८ बर्षिया निभा कुमारी कलवार र सोही गाउँपालिका ४ हरिहरपुर विर्ताकी १७ वर्षिया किरण चौरसियाको शव फेला परेको हो । रक्सौल–सुगौली रेल्वे खण्ड अन्तर्गत रेलको लिगमा उनीहरूको शव फेला परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
घटना स्थलमा भेटिएको कलेजको परिचयपत्रका आधारमा उनीहरु सनाखत भएको छ । निभाको परिचय पत्रमा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनका बुवा राजेश्वर साहले फोन उठाएपछि मृतकको खनाखत भएको पर्सा प्रहरीले जनाए । परिचय पत्रअनुसार निभा पब्लिक कलेजको कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिइन् ।
घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा दुवै युवतीलाई हत्या गरेर त्यहाँ फालिएको देखिन्छ । निभाको खुट्टा काटिएको छ भने अर्कीको टाउको नै काटेको अवस्थामा शव भेटिएको स्थानीयले जनाएको छ । शनिबार मात्रै निभाले बुवासँग ट्युसनका लागि पैसा मागेर लगेकी थिइन् । निभाकी वुवा राजेश्वरले उनीहरु त्यहाँ कसरी पुगेकी विषयमा केहि थाहा नभएको बताए ।
घटनाको बारेमा जानकारी पाएपछि निभ र किरणको परिवार पुरै शोकमा डुबेका छन् । उनीहरु अध्ययनरत कलेका संचालक तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. दीपक शाक्यले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले उनीहरुको शव फेला परेको थाहा पाएपछि आश्चर्य लागेको पनि बताए ।
पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी रेवती ढकालले वीरगन्जकी दुई युवतीको शव फेला परेको थाहा पाएपनि आधिकारिक पुष्टि नभएको बताएका छन् । उनले भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरेर घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिने पनि बताए । उनले भने, ‘घटनाबारे बुझ्न प्रहरी खटिसकेको छ ।’